Fayraska korona | Jyväskylä.fi
Karanteeniohje, somali -pdf
Hagitaan ku saabsan muddada karantiilka iyo ka soocnaanta dadka kale
Kuvallinen ohje maskin käyttöön -pdf
Tilmaanbixinta adeegsiga maaskarada wajiga
Ota koronarokote vuorollasi (somali) – Waxaannu cudud dhererkeedau jirnaa halka ugu fiican -video (THL)
Estä koronaviruksen leviäminen (somali) – Ka hor tag faafidda fayruska korona -video (THL)
Kelan info tartuntatautipäivärahasta (somali), Karantiil miyaa lagu galiyay?, pdf
Corona information Video on Youtube - somali (Info Gloria)
Tallaalada fayruska koronaha ee dadka deggan Jyväskylä, Hankasalmi iyo Uurainen
Dadka deggan degmooyinka waxaa la siinayaa tallaalada fayruska koronaha oo loo marayo nidaamka tallaalada ee aay tajjisay Haay’adda Caafimaadka iyo Nololwanaaggu (THL). Da’da ayaa leh saamaynta ugu wayn ee halis u gelinaysa qofka cudurka koronaha. Sababtaas darteed waxaa tallaalka dadka deegaanka laga bilaabayaa dadka waayeelka ah. Dadka ka yar 70 sano ee xanuuno asaasi ah dartood ku jira kooxaaha dadka halista ah iyo dadka 65-69 sano da’doodu u dhaxeyso tallaaladooda waa la bilaabay. Dadka waawayn eee kale iyo dadka 16 sano jir ka waayn waxaa la tallaalayaa kaddib marka la tallaalo dadka ku jira kooxaha nugul.
Finland tallaalada koronaha ee laga isticmaalo waxaay u baahanyihiin labo jeer in tallaalka la qaato. Waxaa tallaaladaas loo bixiyaa 12 isbuuc mar. Jadwalka tallaalada waxaa saamayn ku leh sida tallaalada loogu helo Finland iyo Bartamaha Finland. Daryeelka caafimaadku wuxuu qiimeynayaa in tallaaladu aay qaadanayaan illaa deyrta 2021.
Tallaalka fayruska koronuhu wuxuu kaa difaacayaa fayruska koronaha (Covid-19) iyo noocyadiisa halista ah.
Tallaalada oo si baaxad leh loo bixiyo waxaa loogaga hortagi karaa sii faafitaanka fayruska koronaha ee shacabka dhexdooda. Tallaalka fayruska koronaha waxaa lacag la’aan lagu siinayaa shacabka oo dhan. Tallaaladu mar kasta waa kuwo uu qoku ikhtiyaarkiisa ku qaadan karo.
Waxaa tallaalada koronaha lagu helaa in ballan la qabsado oo kaliya.
Adeegyada caafimaadka ayaa laga soo wacayaa dadka 65 sano jir ka wayn ee deegaanka deggan waxaana la siinayaa wakhtiyada tallaalka. Haddii qof 70 sano jir ka wayn la soo wici waayo wuxuu ka waraysan karaa wakhtigiisa tallaalka lambarka 014 266 1472. Haddii qof 65-69 sano jira la soo wici waayo 18.5. marka la gaadho, wuxuu soo wici karaa lambarka la talinta koronaha ee 014 266 1472.
Dadka waayeelka ah ee deggan degmada Jyväskylä ee hela adeegga daryeelka guriga waxaay helayaan tallaalka wakhtiga guriga loogu imanayo ee daryeelka la siinayo.
Dadka da’doodu ka yartay 70 sano jir ee xanuuno asaaasi ah qaba sidaas darteedna ugu jira kooxaha dadka u nugul xanuunka waxaa farriin ahaan lagu soo ogaysiinayaa wakhtiga adeegga ballan qabsashadu uu furmo. Dadka kooxda nuglaanshaha ee koowaad ku jira ee da’doodu u dhaxeyso 16-17 sano jir waa la soo wacayaa waxana la siinayaa ballan tallaalka ah. Dadka kale ee shacabka ka tirsan ee qaangaadhka ah adeegga ballan qabsadhadoodu wuxuu furmayaa kaddib marka kooxaha dadka nugul la tallaalo. Tallaalka waxaa la heli karaa oo iyada oo ballan la qabsado.
Kooxda 1: Dadka leh xanuun ama xaalad caafimaad oo aad ugu nugleynaya fayruska koronaha noociisa adag.
• Wareejinta xubnaha jidhka ama wareejinta unugyada jidhka
• Xanuun kansar ah oo daawayn aay ku socoto.
• Khalkhalka nidaamka difaaca oo adag.
• Xanuun kelyaha ah oo adag oo joogto ah.
• Xanuun sambabada ah oo adag.
• Sonkorow nooca 2-aad ah daawo lagu daryeelo
• Xanuunka Down la yidhaahdo (dadka waawayn)
Kooxda 2: Dadka leh xanuun ama xaalad caafimaad oo aad ugu nugleynaya fayruska koronaha noociisa adag.
• Xiiq ama astma u baahan daawayn joogto ah.
• Xanuun wadnaha ah oo adag, tusaale ahaan wadnaha oo xaalad uu shaqadiisa gabo ah (kuma jiro kaliya xanuunka dhiig karka ah)
• Qalalka maskaxda ama xanuun kale oo neefsashada dhib u keeni kara oo maskaxda ah ama xaalad sidaas ah
• Daryeel daawo ah oo daciifinaysa difaaca dabeeciga ah ee jidhka
• Sonkorowga noocisa 1-aad ama howlgab kelyaha dheeraadka ah
• Xanuunka neefsashadu aay khalkhal gasho marka uu qofku hurdo (neefsashada oo khalkhal gasha in ka badan 15 saacaddii) oo adag ama dhex dhexaad ah
• Xanuun cilmi nafsi ah
• Cayil jirro ah (cabirka cayilka oo ah ugu yaraan 40)
Goobta tallaalka waxaa laga heshiinayaa wakhtiga ballan qabsashada. Kuwaas oo ah:
• Goobta fardaha ee Killer dhismaheeda daawashada oo ku yaalla cinwaanka Vesangantie 24, dabaqa 2-aad, wiish ma laha.
• Xarunta caafimaadka ee Kuokkala goobteeda ku taalla ciwaanka Syöttäjänkatu 10, si bilaa hakad ah ayaa goobtaas loo gali karaa.
• Xarunta caafimaadka ee Hankasalmi
• Xarunta caafimaadka ee Korpilahti iyo
• Xarunta caafimaadka ee Uurainen
Goobaha tallaalka in laga daneysto waa amni - xasuusnoow arrimahan marka aad imanayso goobaha tallaalka:
• Ha iman tallaalka haddii aad leedahay calaamado ku habboon cudurka fayruska koronaha, tusaale ahaan xummad, qufac, xanuun cunaha ah, neefta oo ku qabanaysa, xanuun murqaha ah ama lablabo.
• Kaalay tallaalka wakhti hore.
• Isticmaal af iyo san dabool ama caaga wajiga la saarto.
• Ka warhay nadaafadda gacmaha.
• Ku caddee aqoonsigaaga tusaale ahaan kaadhka aqoonsiga.
• Ilaali masaafo labo mitir ka badan in aad isku jirsataan dadka kale.
• Sii joog tallaalka kadib ilaalo aad ku jirayso ugu yaraan 15 daqiiqo.
Haddii aad qaaday fayruska koronaha waxaan kugula talinaynaa in aad tallaalka qaadato 3 bilood kadib marka aad calaamadaha xanuunka isku aragtay ama xanuunka lagugu sheegay.
Tallaalada fayruska koronaha waxaa la gu qiimeeyay darajooyinka u dajisan amniga, tayada iyo waxqabadka ee daawooyinka kale iyo talaalada kaleba lagula socdo si joogto ah. Fayruska koronuhu wuxuu lahaan karaa saamayno dhibaato leh sida aay u yeelan karaan tallaalada kale oo dhan. Ciladaha tallaalka ka imanaya badankoodu waxa weeyaan kuwo khafiif ah oo hore qofka u dhaafa. Waxaay noqon karaan goobta tallaalka oo qofka gaduudata, barar iyo kulayl. Way yartahay in tallaalka uu qofku ka qaado xummad wakhti gaaban ah ama xubnaha jidhka ama madaxa oo xanuuna. Waxaa calaamada xanuunka lagu daryeeli karaa xanuun baabiiyaha xumadda iyo infekshanka, Cilladaha tallaalku waxaay badanyihiin marka qaybta labaad ee tallaalka la qaato.
Xaalado aad u yar ayaa jiri kara oo tallaalku uu keeni karo xasaasiye aad u adag, kuwaasna goobaha tallaalku waa u diyaar daryeelkooda. Adduunka oo dhan dhowr qof in aay cilladaha noocaas ah ku keeneen ayaa la qoray.
Tallaalada la isticmaalo
Wakhti xaadirkan waxaa Midowga Yurub loo oggolaaday in lagu iibiyo saddex tallaal oo fayruska koronaha ah:
• Tallaalka fayruska koronaha ee aay soo saareen Pfizerin ja BioNTechin
• Morderna tallaalka fayruska koronaha ee aay soo saareen
• Tallaalka fayruska koronaha ee AstraZeneca (waxaa la siiyaa dadka 65 sano buuxiyay)
Tallaalka dabadii waa in laga warhayaa masaafada amniga ah in la isku jirsado oo af iyo san dabool la isticmaalo
Tallaalka dabadii waa in laga warhayaa masaafada amniga ah in la isku jirsado oo af iyo san dabool la isticmaalo iyo in laga warhayo nadaafadda gacaha iyo qaadka wanaagsan ee loo qufaco. Tallaalka dabadii waxaay qaadanaysaa bilo badan inta Finland oo dhan loo helo difaac cudurka koronaha ee caabuqa laga guulaysanayo.
Haddii aad isku aragti calaamado ku habboon koronaha, baadhitaanka mar oo ilaali in aad ku dhaqanto hagitaanada daryeelka caafimaadka lagaa siiyo.
La talinta tallaalka koronaha
• iimaayl ahaan koronarokotus@jyvaskyla.fi
• taleefan lambarka 014 266 1472
Magaalada Jyväskylä boggeeda tallaalka koronaha: https://www.jyvaskyla.fi/koronarokotus
Information about coronavirus and vaccines in different languages https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona/muutkielet
Magaalada Jyväskylä boggeeda korona: https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona
Information on the Coronavirus in Jyväskylä in English https://www.jyvaskyla.fi/en/health-care-and-social-services/healthcare-services/information-coronavirus-jyvaskyla
Macluumaadka cusub ee Finnish Institute of Health and Welfare (Hay’adda nololwanaagga iyo caafimaadka THL) oo ingiriis ah: https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates
Macluumaad ku saabsan go’aanka dowladda Finland oo la xiriira fayraska korona oo af ingiriis ah https://valtioneuvosto.fi/en/information-on-coronavirus
Macluumaadka korona oo ku socda dadka deggan Jyväskylä
Talobixinada iyo xadeymaha koronaha waa lagu burinayaa Jyväskylä
Talobixinada iyo xadeymaha koronaha waa lagu burinayaa Jyväskylä Mar dambe ayaynu kulmi karnaa, jimicsan karnaa waxaanan ka qaybqaadan karnaa munaasabadaha ama waxaan aadi karnaa maktabadaha. Wali sii isticmaal af iyo san daboolka, gacmahaaga dhaq ilaalina in aad dadka masaafo amni ah isku jirsataan. Haddii ad dareento xataa calaamado yar, aad baadhitaanka koronaha. Si wadajir ah an ula dagaalanno koronaha oo an qaadano talaalka marka wakhtigeena ay gaadho.
Kahor tag qaadidda cudurka
Ugu yaraan 20 ilbiriqsi ku dhaq gacmaha biyo iyo saabbuun. Warqad nadiif ah ku engeji gacmaha. Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa maaddada jeermisdilidda.
Ha taataaban indhaha, sanka ama afka, haddii aadan islamarkaas gacmaha soo dhaqan.
Haddii aad qufacdid ama hindhistid, safaleeti ama warqad loogu talaggalay wejigaaga ku dabool oo safaleetigaasna qashinka ku rid. Haddii aadan safaleeti ama warqad kale haysanin, ku qufax laabatada gacanta shaarka, calaacasha ha ku quficin.
2 mitir u jirso dadka kale.
Ha ugu yeedhin marti gurigaaga, adiguna cidna ha martiyin.
Haddii aad xanuunsantahay gurigaaga joog.
Isticmaal af iyo san dabool marka aanad awoodayn in aad dadka in kugu filan u jirsato, ee aad tusaale ahaan saarantahay gaadiidka dadwaynaha ama marka aad tagayso baadhitaanka koronaha.
Astaamaha cudur ama xanuun ee fayraska korona (COVID-19) waxay tusaale ahaan noqon karaan xummad, qufac, neefsashada oo adkaata, daal, lallabbo iyo shuban.
Cudurkan wuxuu khatar gaar ahaaneed u lahaan karaa dadka da’da ah (waayeelka ah) iyo kuwa jirrooyin kale qaba, tusaale ahaan cudurrada sambabbada iyo wadnaha.
La soo xidhiidh talo bixinta koronaha, haddii aad isku aragto astaamaha xanuunka.
Haddii ad leedahay astaamo khafiif ah xataa, la soo xidhiidh lambarka koronada ee daryeelka caafimaadka (014 266 0133). isniinta ilaa jimcaha saacadda 8-16, sabtida iyo axadda saacadda 9-15.
Wakhtiyada kale soo wac lambarka heeganka ee ah 116 117.
Haddii ad u baahantahay turjumaan, u sheeg qofka taleefanka kugula hadlaya.
Dadka lixaad la’aanta maqalka qaba adeegga ay ballanta ka qabsanayaan ama lagu ogaysiinayo natiijada baadhitaanku waxaay ku shaqaysaa fariin qoraal ah lambarkuna waa 050 303 7722.
ku samee weydiimaha astaamaha xanuunka adeegga Omaolo (finish, iswiidhish ama ingiriis). ama soo wac telefoonka korona ee daryeelka caafimaadka 014 266 0133 Markaad sii maraysid qiimaynta asaamaha xanuunka ee Omapalvelu, waxaad sidoo kale internet ahaan u qabsan kartaa ballan saami lagaaga qaado.
Shaqaalaha daryeelka caafimaadka ayaa telefoonka ku qiimayn doona, in saami qaadis loo baahanyahay iyo in kale. Telefoonka waxaa lagugu siinayaa tilmaanbixin ku aaddan waxa lagaa rabo inaad samaysid, wakhtiga iyo goobta aad saami qaadista u imaan kartid.
Natiijada baaritaanka koronaha waxaa lagu soo sheegaa farriin telefoonka kuugu soo dhacaysa.
Haddii aad iska soo qaadday baadhitaanka koronaha, joog gurigaaga illaa ilnta aad helayso jawaabta baadhitaanka. Iska ilaali inaad la xidhiidho dad ka baxsan dadka kugula nool gurigaaga.
Haddii saamiga koronuhu uu negatif yahay ama yahay mid taban oo uu hargab caadi ah iska ahaa, guriga ku naso oo dadka kale ha qaadsiin.
Haddii saamiga koronuhu uu yahay boositif, ku sug gurigaaga illaa inta ay kalkaaliso kula soo hadlayso. Ku dhaqan hagitaanka ay kalkaalisadu ku siisay.
Haddii aad xanuunsantahay ha tagin tukaanka
Haddii aad xanuunsantahay oo aadan dukaan iyo farmashiyeba aadi karin, ehelka ama deriska caawimaad weydiiso. Dukaannada raashinka iyo farmashiyaashuba waxay leeyihiin adeegyo guryaha wax la isugu keeno. Haddii aadan caawimaad helin , waxaad weydiisan kartaa lambarada taleefannada soo socda
Dadka deggan Jyväskylä:
Shaqada bulshada qaangaarka ah ayaa furan  Inta lagu jiro saacadaha shaqada 014 266 9664
Dadka waayeelka ah waxaa caawiya Xarunta OIVA 014 266 180
Qoysaska carruuraha leh ee gargaarka u baahan caawinta hore waxey ka helayan xarunta xakamaynta adeegga Isniin – Khamiis 9–14 tel. 014 266 3501.
La talinta qoyska Isniin - Jimco 8-15.30 tel. 014 266 3590
Dadka deggan Hankasalmi: isniin illaa jimce saacadda 8–16 taleefan lambarka 014 267 1490.
Dadka deggan Uurainen: isniin illaa jimce saacadda 8–16 taleefan lambarka 040 772 8543.
Wakhtiyada kale reer Jyväskylä, Hankasalmi iyo Uurainen waxay sidoo kale caawimaad ka helayaan heeganka arrimaha bulshada, t. 014 266 0149.
Isticmaal af iyo san dabool
Dadka da`doodu 12 jirka ka wayn tahay waxaa lagula talinayaa isticmaalka af iyo san daboolka.
Isticmaal af iyo san dabool marka aanad awoodayn in aad dadka in kugu filan u jirsato, ee aad tusaale ahaan
ku jirto goobaha ay dadku wadaagaan ee gudaha ah tusaale ahaan tukaamada, maktabyada, xarumaha dhallinyarta, kaniisadda, teatherka ama hoolalka ruwaayadaha
munaasabadaha dad waynaha, alamiitooyinka bannaanka ka dhacaya iyo munaasabahada aanad iska ilaalin karin
maxadyada waxbarashada ee heerka labaad iyo jaamacadaha
gaadiidka dad waynaha
marka aad u sii socoto baadhitaanka cudurka fayruska koronaha
marka aad ka timaaddo goobaha halista cudurka u ah ee aad imanayso Finland
Ha isticmaalin af iyo san daboolka, haddii aay si aan loo dulqaadan karin kuugu adkayso neefsashada ama haddii aad leedahay sababo kale oo caafimaadkaaga ku saabsan oo kaa hor istaagaya in aad isticmaasho af iyo san daboolka
Goobaha lagu qaybiyo af iyo san daboolada
Magaalada Jyväskylä ayaa u qaybinaysa af iyo san daboolada dadka magaalada deggan ee danyarta ah. Dadka magaalada deggan intooda kale iyaga ayaa iibsanaya af iyo san daboolada. Waxaa lagu talinayaa dadka ka wayn 12 sano inaay isticmaalaan af iyo san daboolka.
Af iyo san daboollada waxaa lagu qaybinayaa goobahan xiga:
Xarunta sooshalka ee Hannikaisenkatu, Hannikaisenkatu 37, waxaayna furantahay isniin illaa jimce saacadda 10–14.
Adeegyada ka qaybgalka waddanka, Väinökatu 1, isniin illaa jimce saacadda 10–13.
Kyllö, Palokka iyo Sampoharju, talaado iyo khamiis saacadda 12–16
Korpilahti, Säynätsalo iyo Tikkakoski, talaado iyo khamiis saacadda 14–16
Xafiiska tuulada ee Huhtasuo, Nevakatu 1, isniin illaa iyo jimce 9-13.
Xarunta waxqabadka muwaadiniinta ee Matara hoolkeeda/Gloria, Matarankatu 6 A, isniin illaa khamiis saacadda 9-16 iyo jimce 9-14.
Haddii aad ku jirto karaantiil ama gooni u soocid
Ka dalbo talobixin kusaabsan karaantiilka kalkaalisada. Waa muhiim, inaad tilmaanbixinta raacdid. Faahfaahin dheeraad ah ka fiirso bogga karantiinka https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona/karanteeni
Qaado tallaalka marka doorkagu yimaado.
Ablikeeshinka korona soo gasho telefoonkaaga
Ablikeeshinka korona wuxuu sheegayaa, haddii aad si waafaqsan qiimayntiisa ugu dagnaatay fayraska korona. Koronavilkku waxaad ka soo dajjisan kartaa isaga oo bilaa lacag ah boggan https://koronavilkku.fi/.
Information on the Coronavirus in Jyväskylä in English
Information on the Coronavirus in Jyväskylä – other languages https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona/muutkielet
Macluumaad wakhtiga la socda oo ku qoran luqadda ingiriiska: Finnish Institute of Health and Welfare (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL): https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates
Macluumaad ku saabsan go’aanka dowladda Finland oo la xiriira fayraska korona oo af ingiriis ah https://valtioneuvosto.fi/en/information-on-coronavirus, Somali - Soomaali https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/aineistoja-kielilla#kieli-somali